TOP NEWS: Waqtiga ay dhaceyso Doorashada Madaxweynaha Soomaliya oo la shaaciyay Goormee ayaase laga dhigay??? | Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Waqtiga ay dhaceyso Doorashada Madaxweynaha Soomaliya oo la shaaciyay Goormee ayaase laga dhigay???
Saturday November 26, 2016 - 8:53 under Somali News by Tifaftiraha K24
Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Danjire Michael Keateng ayaa sheegay in doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ay dhici doonta 15ka Bisha December ee Sanadkan islamarkaan aay doorashada dib u dhacday 15 Maalmood.
Danjire Michael Keateng,oo la hadlayay Idaacadda BBC-da qeybta la hadasha Afrika ayaa sheegay in uu rumeysan yahay in xal laga gaaray cillado farsamo oo soo wajahay jaantuskii doorshada Madaxweynaha eek u beegneyd 30-ka November islamarkaana hadda la isla gartay in doorashada Madaxweynaha la qabto Bisha December bartamaheeda.
Waxaa uu sheegay Keating in 3/2 meel la doortay Xildhibaannada aqalka hoose islamarkaana ay dooran karaan Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana uu rajo ka muujiyay in todobaad gudahii lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka Xildhibaannada aqalka hoose ee ka socda dalka.
Doorashada Afhayeenka Baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen ayuu sheegay in iyana waqti la siiyay kaas oo uusan rasmi ugu dhawaaqin.
Walaaca la xiriira in Codadka lakala iibsanayo oo uu jiro Musuq ayuu sheegay in ay tahay sheeko taagan oo xalkeedana lagu jiro,waxaase uu xaqiijiyay in ay wadaan dadaall la isku dayayo in arrintaas lagu xakameeyo.